विचित्र संसार Archives | Page 108 of 115 | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
यी नर्सले राम्री र सेक्सी भएकै कारण जागिर छोड्न बाध्य…
एजेन्सी । एउटी नर्सलाई ‘सेक्सी’ पहिरन लगाएकै कारण अस्पतालबाट राजीनामा दिन वाध्य पारिएको छ । अस्पतालले भने उनले विरामीको सेवामा भन्दा आफ्नो पहिरनमा बढी ध्यान दिएको र लाज लाग्ने पहिरन लगाएर नर... Read more
यो फोन किन्नुहुन्छ भने हेलिकोप्टरमार्फत हुनेछ ‘होम डेलिभरी
लग्जरी ह्यान्डसेट बनाउने बेलायती कम्पनी भर्चुले एक पटक पुनः महँगो मोबाइल फोन लञ्च गरेर सबैलाई अचम्मित बनाएको छ । यसको मूल्य सुन्दा तपाईं चकित हुनुहुनेछ । भर्चु सिग्नेचर कोब्राको मूल्य लगभग ३... Read more
भुत खेदाउँदा झण्डै ज्यान गयो !
भुत भनेपछि बम बहादुर अहिले पनि झस्किन्छन् । भुत भाग्यो कि भागेन तर भुत खेदाउने क्रममा बम बहादुरले झण्डै ज्यान गुमाए । कुरा बैसाख २५,२६ गते तिरको हो । पाँचथरको साबिक आङ्ना गाबिसको रातमाटे गाउ... Read more
यि हुन ४५ दिने छोरीको टाउको काटी पूजा गर्ने पापी पिता
एजेन्सी । भारतको उत्तर प्रदेश संभल जिल्लास्थित चंदासी भन्ने ठाउँमा एक पिताले आफ्नी ४५ दिनकी छोरीको टाउको काटी भगवानलाई चढाएका छन् । प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ तर उनी फरार रहेको समाचारहरूम... Read more
राजधानीमा भूत आतंक ! यस्तो थियो घटनाक्रम
राजधानी काठमाडौंको कमलादीस्थित मुख्य सडकसंगै जोडिएको एक भब्य भवनमा सोमबार बिहानदेखि भूत आतंक सुरु भयो । घरमा भूतले अनौठो आवाज निकालिरहेको हल्ला चलेपछि मानिसहरु भेला हुन थाले । प्रहरी कार्याल... Read more
यी हुन् संसारकै ५ देशहरु, जहाँ बलात्कारको सजाय छ एकदमै खतरनाक, क्रूर तरिकाले दिईन्छ दण्ड…
एजेन्सी । बलात्कारलाई हरेक समाजमा अपमानजनक अपराध मानिन्छ । त्यसै कारणले गर्दा यसको सजाय निकै नै क्रुर तरिकाले दिने गरिन्छ । बलात्कारबाट शिकार भएका महिलाहरुले आफ्नो अनुहार समाजलाई देखाउन लाज... Read more
एडिडास कम्पनीको स्थापना ९२ वर्ष पहिला अर्थात् सन् १९२४ मा भएको हो । तर ११ सय वर्ष पहिले मरेकी एक महिलाको खुट्टामा समेत ‘एडिडास जुत्ता’ फेला परेपछि त्यसले तहल्का मच्चाएको छ । मंगोलियामा ११ सय... Read more
मृत प्रेमीमार्फत गर्भवती बन्ने धोको…
अस्ट्रेलियाकी एक चौबीस वर्षीया युवतीले बितिसकेका आफ्ना प्रेमीबाट सन्तान जन्माउने रहर गरेर सबैलाई आश्चर्यमा पारेकी छिन् । आयला क्रेस्वेल नामक ती युवतीको रहर सुन्दा जो–कोहीको मनमा प्रश्न उब्जन... Read more
जब प्रेमिकाले बन्दुक देखाएर विहे मण्डपबाट दुलाहा उठाएर लगिन्…
एजेन्सी । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित हमीरपुरमा एक युवतीले दुलाहा बनेर मण्डपमा बसेका आफ्ना प्रेमीलाई उठाएर लगेपछि हंगामा मच्चिएको छ । घटना सोमबार रातिको हो । दुलाहा र दुलहीबीच माला र औठी लगाउने... Read more
दुईवटा विहे नगरुन्जेल छोराछोरी नहुने परम्परा
एजेन्सी । राजस्थानको बाडमेरमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ प्रत्येक पुरुषले दुईवटा विहे गर्नै पर्छ । यो एउटा परम्परा नै भइसकेको छ । दोस्रो विहे नगरुन्जेलसम्म छोराछोरी प्राप्त हुदैन् । देरासर गाउँक... Read more